Antsafa tamin’i Chontalita Vázquez, mpikatroka nomerika ho an’ny fiteny Chontal · Global Voices teny Malagasy
Mpampiatrano ny kaonty Twitter @ActLenguas ny 16 hatr@ 22 Martsa 2020.
Voadika ny 13 Avrily 2020 7:28 GMT
Photography shared by Chontalita Vázquez.
Ny taona 2020, hotohizantsika ny fanentanana ety anaty media sôsialy hanasàntsika olona maro hitantana ny kaonty Twitter, @ActLenguas (Fikatrohana ho an'ny fiteny) ka hizaran'izy ireny ny niainan-dry zareo tamin'ny tamin'ny famelomana indray sy fisoloana vava ireo fiteny zanatany. Resahan'ity lahatsoratra fampahafantarana ity ny momba an'i Chontalita Vázquez (@shineyhua) sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy.
Rising Voices (RV): Mba lazalazao aminay ny momba anao, azafady:
Manomana “Doctorat” amin'ny Fandalinana ny Faritra aho, ao amin'ny Anjerimanontolo Mahaleotenan'ny Chiapas. Manana diplaoma “Master” amin'ny Fandalinana Ara-kolontsaina sy bakalaoreà tamin'ny fampianarana indizeny avy amin'ny Anjerimanontolom-Panjakàna momba ny Pedagôjia ao Ajusco, Mexico City.
Amin'izao fotoana izao, mpampiroborobo ara-kolontsaina, miasa ho an'ny tena manokana ho an'ny fiteny Chontal / Tsome ao Sierra Sur de Oaxaca. Nandray anjara tamina sehatra fifanakalozan-dresaka isankarazany, atrikasa, fampianarana sy fandaharanasa nanolorana sertifikà ary nafantoka tamin'ny fahaizana teny roa sy ny fanabeazana ifanenan'ny kolontsaina samihafa, ary momba ny zon'ireo vondrompiarahamonina teratany. Nampiroborobo hetsika maro isankarazany aho ho fanomezana aina ny fiteny Chontal, izay heverina amin'izao fotoana izao ho tena tandindonin'ny fanjavonana.
Noho ny fisian'ny tambajotra sôsialy, indrindra fa ny Facebook, nisy fahatongavan-tsaina goavana momba ny lanjan'ny fiteninay, ny Chontal. Vokany, miha-betsaka ireo tanora avy amin'ny vondrompiarahamonina Chontal hafa no nanatevina laharana ny tetikasa tamin'ny alàlan'ny famoronana ny tranonkalan-dry zareo azy manokana, hatramin'ny fampiroboroboana ireo lesona fampianarana miainga avy aminà fehezanteny na teny fohy.
Hifantohako voalohany indrindra ireo fehezanteny amin'ny fiteny Chontal miresaka ny fiainana andavanandro sy ireo zavamisy momba ny vondrompiarahamonina Chontal.
Hanaitra ny fahatongavan-tsaina eny anivon'ny vahoaka Chontal momba ny lanjan'ny fanekena ny maha-vahoaka Chontal azy
Manao izay hahitàn'ny olona ny kolontsaiko
Hamorona fahalinana avy any anatin'ireo andian-taranaka tanora mba hianatra ny fiteny Chontal
Hifantoka misimisy kokoa amin'ny fianarana ny fiteny Chontal